टिप्परले चुडालिदिएको त्यो प्रेम.. 'टिप्पर सहरी क्षेत्रमा गुडाउनका लागि हुँदै होईन' - Lokpath Lokpath
२०७६, १५ माघ बुधबार ११:२१
प्रकाशित मिति : २०७६, १५ माघ बुधबार ११:२१
काठमाडौं । सुर्खेतमा टिपरको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु भएपछि उनकी प्रेमिका भनिएकी एक युवतिले आत्महत्या गरेकी छिन् । हिजो बिहान वीरेन्द्रनगर–४ चोकमा भे १ ख २२४२ नम्बरको टिप्परले विपरीत दिशाबाट आएको भे ६ प २१७८ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा केशरबहादुर सिंहको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो ।
घटनाबाट विक्षिप्त भएकी उनले आत्महत्या गरेकी हुन् । उनी सुर्खेतस्थित मामाघरमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएकी हुन् । केशरको मृत्यु भएपछि निकै विक्षिप्त भएकी कालिकोटकी अरुणा शाहीले सिंहको मृत्युको पीडा खप्न नसकेर झुण्डिएर आत्महत्या गरेको भन्दै उनका साथीभाईले बाँकी ६ जन्मसँगै होउन् भन्दै श्रद्धान्जली व्यक्त गरेका छन् । करिब एक साताको बिचमा टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु भएको यो दोस्रो घटना हो । अर्थात् एक साताअघि विवाहको कार्ड बाँड्न हिँडेकी एक युवतीको टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो । विवाहका लागि तयारी गरिरहेका उनका प्रेमी विक्षिप्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् ।
दिनभर तनावग्रस्त,२ राउन्ड हवाइ फायर
कालिकोट महावै गाउँपालिका ३ का केशर सिंहको टिप्परले ठक्कर दिएर मृत्यु भएपछि सो क्षेत्र हिजो दिनभर तनावग्रस्त भएको थियो । सिंहको निधन भएलगत्तै स्थानीयवासी र आफन्तले नाराबाजी गरेका थिए । भिड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले २ राउन्ड हवाइ फायर समेत गरेको थियो ।
प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा ८ जना भन्दा बढी स्थानीय घाइते भएका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार जुम्लाका २५ वर्षीय महेश गौतम, दैलेखका १६ वर्षीय हिदेशकुमार शाही, दैलेखका १७ वर्षीय कृष्णबहादुर थापा, दैलेखकै १७ वर्षीय गोकुल गिरी, कालीकोटका कमान सिंहलगायत ८ जना घाइते भएका हुन् । उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । मृतकका आफन्तले यरिचौक र गौतमचोकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
टिप्परले ठक्कर दिएर दिनहुँजसो मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको घटना देखेका स्थानीय रोकिएनन् । उनीहरुले चर्को नाराबाजी गरे । स्थानीयवासी र मृतकका आफन्तले सडक अवरोध गर्दै चर्को विरोधसहित नाराबाजी गरेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा समेत जारी गर्नुपरेको थियो । प्रशासनले वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा तनावग्रस्त स्थिति नियन्त्रण गर्न भन्दै मंगलबार साँझदेखि बुधबार बिहान ६ बजेसम्म कर्फ्यू जारी गरेको थियो ।
कफ्र्यु अहिले हटिसकेको छ । प्रहरीले टिप्पर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । मृतक परिवारलाई शव बुझाउन छलफल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
चालकको लापरबाहिका कारण एक युवकले अनाहकमा ज्यान गुमाए ।
फोटोहरु : गिता बोहोराको फेसबुकबाट
पछिल्लो समय टिप्परको ठक्करबाट दिनहुँजसो मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा टिप्परले ठक्कर दिएर भागेको घटना समेत छ । यसैबिच माघ १४ गते काठमाडौंको शान्तिनगरमा टिप्परको ठक्करबाट एक महिला घाइते भएकी थिईन् ।
शान्तिनगर सडकमा जेब्राक्रसिङबाट बाटो काट्दै गरेकी महिलालाई टिप्परले ठक्कर दिएको थियो । घाइते महिलाको सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
टिप्पर दुर्घटनाका प्रमुख कारण के हो ?
बढ्दो टिप्परको चाप र तिव्र गतिका कारण पछिल्लो समय टिप्परको ठक्करबाट भएका दुर्घटनाको संख्या बढ्दै गएको छ ।
अव्यवस्थित तथा साँघुरो बाटो, तिव्र गति र कम उमेरका चालक, बढ्दो सवारी चापका कारण टिप्पर दुर्घटना बढीरहेको छ ।
File : photo_lokpath.com
टिप्परः शहरमा गुडाउन बनेकै हैन
शहरी क्षेत्रमा हुने गरेका टिप्पर दुर्घटना तिव्र गति र माथि प्रस्तुत गरिएका कारणबाट नै हुने गरेका छन् । ‘अफरोड’ का लागि बनाइएको टिप्पर चलाउने अधिकांश कम उमेरका छन् । हेभी गाडी’ भए पनि शक्तिशाली हाइड्रोलिक इन्जिन, तुरुन्तै गति लिनसक्ने क्षमता आदिका कारण टिप्परमा युवाहरूको आकर्षण छ ।
तिनमा भएको जोशले शहरी परिवेशमा कसरी सवारी हाँक्ने भन्ने चेत हराईदिन्छ र दिनहुँ दुर्घटनाको समाचार आईरहन्छन् । त्यतिमात्रै होईन नियमित सवारी चेकजाँच नहुनु, मोबाइल फोनको प्रयोग गरिनु पनि दुर्घटनाका कारण हुन् ।
केहि समय अघि अत्याधिक दुर्घटना हुन थालेपछि विहान र दिउँसो काठमाडौँ, भक्तपुरमा पनि टिप्पर नगुडाउन भनिएको छ । टिप्परका कारण सवारी दुर्घटना बढेपछि गृह मन्त्रालयले गत २७ असारमा उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा दिउँसो टिप्पर चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार उपत्यकामा राति ८ बजेपछि मात्रै टिप्पर चल्न पाउने भनिएको छ । भूकम्पपछिको पूनर्निमाणको लागि गिटि बालुवा, ढुंगा ओसारपसार गर्नको लागि अत्याधिक मात्रामा टिप्परको प्रयोग भइरहेको छ । बिहानको समय तोकिएको छैन । तर रातको समयमा उनीहरुको गतिले अन्य सवारी चालक आत्तिन्छन् । विभिन्न मुलुकमा सडक अनुसार कुन गतिमा सवारी हाँक्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । तर हाम्रोमा त्यसो नहुँदा टिप्परले हेपेर लेन मिचेर हाँकिरहेका छन् । हाम्रा गाउँ–शहरमा ६७०० सीसी इन्जिन र ३१ टनसम्म भारवहन क्षमता भएका टिप्पर गुडिरहेका छन् ।
एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम (एबीएस) नभएका, ठूलो पांग्रा भएका, ६ सिलिण्डर सहित हाइड्रोलिक इन्जिनयुक्त यस्ता टिप्परहरू शहरी बाटोमा गुडाउन प्राविधिक रूपले उपयुक्त नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
केहि दिन अगाडी मात्रै महेन्द्रनगरमा यस्तै घटना भयो ।
हेर्नुहोस् यो लिंक
हुनेवाला बेहुलीलाई ४ दिनअघि टिप्परले मारेपछि …‘
अक्सर प्रेम कथामा निर्मित चलचित्रमा हामी देख्छौँ, नायक र नायिका एक अर्कालाई अत्यन्तै प्रेम गर्छन् । युवा मनमा अंकुराएको प्रेमको डोरी कसिलो भएर जान्छ । तर अफसोच उनीहरुको प्रेम परिवारले स्वीकार गर्दैनन् अनि भागेर अन्तै कतै जान्छन् । निर्देशकले उनीहरुलाई मायालुको गाउँमा पुर्याउँछन् । त्यसपछि दुखसुख चलाउँदै गर्दा उनीहरुलाई परिवारले खोजीनिती गर्छन् । फेला पार्छन् । छुटाउन खोज्छन् तर सक्दैनन् । अन्तत उनीहरुको विवाह गराइदिन राजी हुन्छन् । र दुवै परिवारका तर्फबाट धुमधामका साथ बिहे गरिदिन तयारी गर्छन् । नायक नायिका दुवै खुसीले उफ्रिन्छन् । आफ्नो प्रेमको जित भएको खुसीसँगै आफ्ना साथीलाई निम्ता गर्न जान्छन् । अनि फिल्ममा ट्वीस्ट आउँछ । दर्शक झसंग हुन्छन् ।
हो, निम्ता बाँड्ने क्रममा साईकलमा सवार हुनेवाला दुलही अचानक दुर्घटनामा पर्छिन् अनि उनको त्यहि निधन हुन्छ । परिवारको राजीखुसीमा आफ्नो हुनै लागेकी आफ्नी दुलहीको यसरी मृत्यु हुँदा हिरो अर्थात् हुनेवाला बेहुला कति विक्षिप्त हुन्छन् । आफ्नो वर्षौंदेखिको प्रेमलाई नियतिले चटक्क चुडाएर लैजाँदा उसको सारा सपना चकनाचुर हुन्छ । उसले देखेको सँगै बाँच्ने सपना, सुखदुख, उकाली ओराली अनि भन्ज्याङ चौतारी सँगै गर्ने सपना पल भरमै जलेर खरानी हुँदा उसले कहाँ मन बुझाउन सक्छ र वर्षौंदेखि तिर्खाएको काकाकुल झैँ हुन्छ उसको जीवन पनि । यो त रील लाइफको कुरा भयो एकछिन अभिनय हुन्छ रीलमा कैद गरिन्छ । त्यसपछि दर्शक समक्ष पुर्याइन्छ र दर्शकले पनि भावुक हुँदै हेरिदिन्छन् र कति राम्रो मुभी बनेछ भनी प्रतिक्रिया दिँदै सकिन्छ ।
कल्पना गर्नुस् त यो रिल लाईफमा भएका कथा कसैको वास्तविक जीवनमा भयो भने कति मन दुख्ला रु
महेन्द्रनगरका प्रकाश टेरको रियल लाइफमा यस्तै बज्रपात परेको छ । उनीमाथि परेको बज्रपात कुनै मुभिको रीलमा खिचिएको एउटा अपूरो प्रेम कहानी भन्दा कुनै फरक नै छैन । माघ ९ गते अर्थात् बिहिबार न्युज डेस्कमा एउटा सनसनीपूर्ण खबर आयो “महेन्द्रनगरमा टिप्परको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु” । सहकर्मी मित्रले भन्नुभयो महेन्द्रनगरमा दुर्घटना भएछ न्यूज अपडेट गर्नुपर्यो । महेन्द्रनगर प्रहरीलाई फोन लगाऔँ ।
मनमनै सोचे “दुर्घटना पनि कत्ति हुन सकेको अहो ! गाडी चलाउनेहरु आँखा नै हेर्दैनन् कि के हो ? बाटोमा मान्छे हिडेको नि नदेख्ने !”
मनमनै कड्किए पनि । संचारकर्मी भएको नाताले मेरो काँधमा जिम्मेवारी थियो न्यूज अपडेट गर्ने । मैले त्यसै गरे । उही छ क समेटेर । हो, हामी ब्रेकिङ गर्नुपर्ने वा हार्ड न्यूज जुन छ वटा क को जवाफले आम मानिसको मनको कौतुहलता तत्काललाई साम्य पार्छ । के कहाँ कहिले कति कुन किन यी नै कुराको जवाफसहितको एउटा खाका बनाएपछि ‘हार्ड न्यूज’ बन्ने कारणले त्यहि गरे । पछि मात्रै विस्तृतमा समाचार लेखिन्छ ।
पछि थाहा भयो, ती युवति माघ १३ गते अर्थात् आज बेहुली बन्न लागेकी रमिता रहेछिन् । उनी आफ्नो विवाहको निम्ता बाँड्न हिड्दा उक्त दुर्घटनामा परेकी रहेछिन् । मनमा उत्साह बोकेर जीवनको रंगिन सपना बोकेर कति खुसी हुँदै निम्ता बाँड्न हिँडेकी उनलाई टिप्परले किचेर सपना सारा सपना क्षणभरमै रंगहीन बनिदियो । रंग थियो त केवल खोलाजसरी बगेको उनको रगतको । सडकमा पल्टिएको शव भिज्नेगरी लत्पतिएको रगतले मानिसहरुको होशहवास उड्यो । बिहेको निम्तो बाड्न हिडेकी रमिता कहिल्यै फर्केर नआउने गरि गइन्, सबैलाई रुवाएर ।
तर उनको लागि सिन्दुर लिएर कुरेर बसेको प्रकाश कुन हालतमा होलान् एकचोटी कल्पना गर्नुहोस् त जो आफ्नो वर्षौंदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने पर्खाइमा थिए ।
यदि त्यो घटना नहुँदो हो त यतिबेला नेपाली सेनामा कार्यरत प्रकाश दुलाहाको भेषमा सजिएका हुन्थे अनि मनमा अनेकौं खुसीका बहारसँगै बाजाका साथमा जन्ती लिएर रमिताको घर जान्थे होला । अनि उता रमिता चटक्क सजिएर बेहुली बनेर बेहुला ९प्रकाश० लाई कुहिरहेकी हुन्थिन् । बाटो हेरिरहेकी हुन्थिन् ।
तर दुर्भाग्य बिहे घर शून्य छ, आज । उल्लासको ठाउँमा स्तब्धता छ । घर घर जस्तो नभएर मसानघाट जस्तो सुनसान छ, आज । रोदन छ, होस हराएजस्तो देखिन्छन्, परिवारका सदस्य । कुनै चलचित्रको प्लटजस्तो लाग्ने यो घटनापछि अब ति चखेवाका जोडीहरु कहिल्यै भेट्ने छैनन् ।
फेरि त्यो दिन …
गत बिहिबार कन्चनपुरको महेन्द्रनगरमा टिप्परको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भयो । जो आज दुलही बन्दै थिइन् । आफ्नो बिहेको निम्तो बाँड्न हिडेकी उनलाई टिप्परले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो । उनको मृत्यु त भयो तर यता उनको हुन लागेका बेहुला प्रकाश पानी बिनाको माछा जस्तै भएका छन् । प्रकाश नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । बिहेको लागि भन्दै बिदामा बसेका उनले सायदै सोचे होलान् जीवनमा यस्तो बज्रपात आइलाग्ला भनेर । उनको जीवन अपत्यारिलो दुर्घटनाले छेतबिच्छेद भएको छ । रमिता भट्टको घर बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका– १ गुरूखोला हो । उनि एक वर्ष अगाडी देखि महेन्द्रनगर बस्दै आएकी थिइन् । ब्राह्मण परिवारकी छोरी भएकाले परिवारले नदिने भएपछि क्षेत्री थरका प्रकाशले एक वर्षअघि नै उनलाई महेन्द्रनगरमा बस्ने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए । उनीहरूको विवाह भने भएको थिएन । विहेका लागि यही माघ १३ गतेको साइत जुरेको थियो । बिहेको निम्तो बाड्न जाँदा सो घटना भएको हो ।
दुर्घटनापछि प्रकाशले मनै रुवाउने स्टाटस लेखेका छन् । उनले आफू एक्लै यात्रा गर्न नसक्ने बताएका छन् भने आफ्नो रमितालाई साडी लगाएर सिउँदो भरेको हेर्ने रहर भएको लेखेका छन् । उनको यो मार्मिक स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरुले उनलाई सम्झाईबुझाई गरेका छन् । उनको दर्दनाक भावनामा रोएका छन् । भावविह्वल भएका छन् । उनका साथीहरुले लेखेका छन्, नआत्तिउ जोडा । हामी छौँ ।
हेर्नुहोस् प्रकाशको स्टाटस जस्ताको तस्तै
“तेरो लागि रातो साडी ल्याइदिएको छु नि बूढी ! पर्सि हाम्रो बिहे हो, कहाँ गा’छस् छिटो आइज न । मेरो एक चिम्टी सिन्दुरको लागि तैँले आफ्नो फ्यामिली, लाइफ सब छाडेर मेरो साथ दिइस्, तर मलाई बीचमै छोडेर किन गइस् भन् त । एक्लै यत्रो लामो बाटो कसरी हिँडु म हम् रु कति सपनाहरू थिए, तैँले किन धोका दिइस् । मैले भनेको होइन तलाईं केही हुनुभन्दा पहिला म नै नरहुँ भनेर रु तँ अगाडि किन गइस् मलाई छाडेर रु म एक्लै के गरौं, कहाँ जाऊँ भन् त रु आइज न बिहे गरौंला नि १ यो बिहेको साडीमा मेरो सिन्दुर तेरो सिउँदोमा हेर्ने सपना छ मेरो । म नि छिट्टै आउँछु तँ सँगै बूढी, नभुलेस् है मेरो वेट गरेस् । चखेवाको जोडी जस्तै थियो नि हाम्रो माया अब एक गएपछि अर्को आफैँ आउँछु ।” – सबै तस्वीर उनको फेसबुकबाट
हिजोआज यस्ता दुर्घटना बढ्न थालेका छन् । कतै कलेजबाट फर्कदै गरेकी युवती किचिन्छन् त कतै अफिस हिडेका अफिसर त कतै पैदलयात्री । सायदै थोरै दिन होला दुर्घटना नभएको दिन ।
एक महिना अगाडी काठमाडौँको सुकेधारामा बसको ठक्करबाट एक २२ वर्षीय सृष्टि पन्तको मृत्यु भएको थियो ।
बिहान पैदल हिँडिरहेकी पन्तलाई ६ बजे बा ४ ख ५९२० नम्बरको बसले ठक्कर दिएको थियो । गोरखा घर भइ धुम्बाराही बस्दै आएकी पन्तलाई गम्भीर घाइते अवस्थामा उपचारका लागि चावहिलस्थित ओम अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको थियो ।
यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । चालकको सानो लापरबाहीले पैदलयात्रीहरु अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
त्यसकै केही समयअघि नयाँ बानेश्वर चोकमा मर्निङ वाकमा निस्किएका डा।पुष्प जोशीको पनि सवारीसाधनकै ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ हजार २ सय ४३ वटा दुर्घटना भइसकेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६ हजार ४ सय ३६ वटा दुर्घटना भएको छ ।
काठमाडौं । मङ्सिर २८ गते काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा बिहानै मन्दिरबाट फर्किदै गरेकी ४२ वर्षीय